I-Honda Fit esetyenziswayo yindlela yokonga yokufumana ukusuka kwinqanaba A ukuya eB kunye nesisombululo esihle kubazali abangabodwa. Ifoto © Honda
Abazali abangabodwa bayindawo ekhethekileyo xa kuziwa kwimoto yabo esetyenziswayo. Bafuna imoto esetyenziswayo ekhonza iimfuno zabo njengabazali kunye nabantu abangatshatanga.
Yikholwa okanye akunjalo, kukho imoto esetyenziswayo endleleni eya kuhlangabezana neemfuno zabazali abangabodwa kwaye inokumangalisa ukuba ufumane ukuhlawuleka, ukuzonwabisa kumqhubi, kwaye unokuzihlalisa abantwana abancinane emva ukuxubusha okanye ukukhupha.
Masifumane izinto ezithile ngaphandle kwendlela. Eli nqaku lenziwe kwiingcebiso zomzali onalo kwaye akanalo ilungelo lokugcina abantwana. Ayithathi ingqalelo kwiindleko (oko kukuthi iimoto ezisetyenziswa phantsi kwe-$ 10,000) kodwa endaweni yoko ibeka ingqalelo kwizinto ezithile kunye nemizekelo. Kwakhona, zonke iimoto ezi luluhlu zinikezelwe ngamanqaku amahle ngabaPhicothi bamaThengi (ukuthenga okufunekayo).
Olunye uqobo luya kuba kukuba abantwana abathandayo (ubuncinci) kwiindawo zokukhusela ezingasebenzisi i-LATCH system. Kwakhona, sihamba kunye nosapho lwenyukliya yezingane ezimbini ukugcina izinto zilula. Ngoko ke, eli cebiso lifanelana nabazali abangabodwa kunye nabantwana ababini kungekho kwiindawo zokuphepha zabantwana abadinga imoto esetyenziswayo.
Kwakhona, ngelixa ndingengomzali omnye, ndiqhuba zonke izithuthi kuloluhlu kwindima yam njengombuyekezi omtsha wemoto. Xa kunokwenzeka, ndiya kudibanisa nokuhlaziywa kunye neempendulo ngababhali be-About.com uAron Gold obhala ngeemoto ezintsha kunye no-Jason Fogelson ohlala ebalaseleyo obhala ngeSUVs kunye ne-minivans. Ngenxa yezizathu ezingenazo ukungena kuzo, andiyi kucacisa ukuba kutheni i-SUVs kunye ne-minivans zidibene ndawonye kwi-About.com.
Amanani oqoqosho lwamanani asetyenziswe ngoomnyaka ka-2009 ovela kwi-Fuel Economy.gov ukuba iimoto ezisetyenziswayo zisasemveliso. Ngaphandle koko, amanani avela kunyaka ophelileyo wokuvelisa.
I-Honda Fit Car Best Used Car for Parents Single
I-Honda Fit ka-2007 iyimoto esetyenziswayo yomzali omnye. Ifoto © Honda
I-Honda Fit ingaba ngumntwana wokuposa kwimoto esetyenziswayo kubazali abangabodwa. Yinkosi yokuzilungelelanisa. Inomthamo wendawo yokuhlala kunye neendawo zokuhlala ezikuvumela ukuba uthwale uneminyaka emithathu ubudala kunye nesityalo esinde.
I-Honda Fit inomdla kumzali omnye kunye nezingane ezimbini kuba:
Inommangaliso wempahla. Kwakhona ihlala nabantu abane ngokukhululekile.
Kusebenza kakuhle kwi-27-mpg idolophu kunye ne-33-mpg umgwaqo.
Akunamandla kodwa kuyonwaba ukuqhuba, ngokukodwa nge-intanethi yesantya esinezihlandlo ezintlanu.
Akuyena umbukeli kodwa ubukhulu becala kubantwana. Abayi kukufumana nzima.
Imibiko yabathengi inikeze i-Honda Fit iziphumo zayo eziphezulu ukusuka ngo-2007 ukuya.
I-Toyota Camry iCare eThatywayo eThatywayo
I-2007 Toyota Camry yenye yezimoto ezithandwa kakhulu eMelika. Yiye ngaphaya kwayo ukunyamezela kwaye imoto esetyenziswayo yomzali omnye. Ifoto © iToyota
Kulungile, ngoko mhlawumbi iphakathi kweenqwelo zokunciphisa i-yun e-United States. Akukho nto ithi iyasebenza njengeCamry; kodwa yinto eyenza ibe yinto enqwenelekayo njengemoto esetyenziswayo kumzali omnye.
Ngendlela, mhlawumbi uvile iToyota Camry phakathi kweenqwelo ezili - 10 ezibiweyo ezisetyenziswa eMelika. Kuloo ke ngu- 1991 Toyota Camry . Akufanele uqhubelele abantwana bakho emotweni ukusuka ngo-1991.
I-Toyota Camry inomdla kumzali omnye onabantwana ababini ngenxa yokuba:
Itholakala kwimizekelo emine-cylinder, engaphezulu kwamandla akwaneleyo okukrazula wena kunye nezingane.
Iyanceda kakuhle kwi-21-mpg idolophu kunye ne-31-mpg umgwaqo.
Inika indawo eninzi ye-trunk yokukrazula konke okufuneka uyenze xa abantwana beza kutyelela.
Umgca we-bland akayi kuvula umhla njengamanye amanqaku afanelekileyo.
Imibiko yabathengi inika i-Toyota Camry izilinganiso ezilungileyo ukusuka ngo-2001 ukuya phambili.
I-Nissan Altima I-Car Enye Yasetyenziselwa Abazali abangabodwa
I-Nissan Altima isisetyenziselwa ukulala esiphezu kwesivumelwano kunye neCamry. Musa ukuxhoma kulawo macwecwe amagama. Yindlela eninzi yokusebenzisa imoto yabazali abangabodwa. Ifoto © Nissan
Njengoko umzali ongeyena okhuselekileyo owenza iintlawulo zenkxaso yabantwana ngexesha, i-Nissan Altima ingenye yeemoto ezisetyenziswa ngaphantsi kwendlela kwaye yenza ukuba kubekho abazali abangabodwa ekukhangela imoto esetyenziswayo.
Khawuzibuze ukuba kutheni ubona ezininzi zisebenzisa i-Nissan Altimas endleleni? Kungenxa yokuba zisebenza kakuhle.
I-Nissan Altima inomdla kumzali omnye onabantwana ababini ngenxa yokuba:
Itholakala kwimizekelo emine-cylinder evelisa amandla asemasimini kwaye ayiyi kukuyeka ukusebenza kwezilumko. Akunakuqonda ukufumana inguqulo ye-V-6.
Kusebenza kakuhle kwi-city-23 ye-mpg kunye nomgwaqo ongama-31 mpg. Naliphi into efikelela kwisixeko sama-25-mpg inkulu kwi-sedan enkulu.
Inika indawo eninzi ye-trunk (ngokuvula ngokubanzi) ukucima yonke into ofuna ukuyiphatha xa abantwana beza kutyelela.
Umzobo awukatshintshi kakhulu ukususela ngo-2002 ukuze uthenge umzekelo omdala kwaye ungakhange ukhangele.
Imibiko yabathengi inika i-Nissan Altima izilinganiso ezilungileyo ukusuka ngo-2002. Unyaka kuphela onokufuna ukuhlala ucacile ngowama-2005, apho kubonakala ngathi kukho iingxaki kwiinkqubo zombane kunye nepetroli.
I-Ford Enamakhulu amahlanu Aphakamileyo Imoto Eyisebenzisiweyo yabazali abangabodwa
U-Ford Limited wama-Five Five Hundred ezine-door sedan kunye ne-wheel drive esebenzisa igolide (ephakamileyo) kwi-Inshorensi ye-Inthanethi ye-Highway Safety, enceda ukuba kubekho imoto enkulu kubazali abangabodwa. Ifoto © Ford
Phakathi kweForan Taurus kunye neForan Taurus entsha yi-sedan ebizwa ngokuba yi-sedan, iF Ford i-Hundred. Abazali abangabodwa kwimozulu ebanda kakhulu befuna ukuthabatha imodeli esebenzayo kunye ne-wheel drive.
Kwakhona, iForld Five Hundred iyalinyanzeliswa ngokuthengwa koluntu oye waxhonywa kwigama layo kwaye waqonda ukungabi namandla. Akukho nkinga ngokusebenza kwi-horse-203.
IFood Five Hundred ilungele umzali ongabodwa onabantwana ababini kuba:
It has trunk. Xa kuqaliswe okokuqala, iFord yathi yayingabamba iisethi ezisibhozo zeeklasi zegalufu. Ngokuqinisekileyo, abantwana bahamba ngezinto ezininzi, kodwa iiklabhu zegalufa ezisibhozo ezithengiweyo-ubuncinane abanokuba nethemba.
Ayinakusebenza ngokukhawuleza ngeenxa zonke edolophini kwisixeko sama-19-mpg kodwa ihlonipheke ngo-26 mpg kwindlela ehamba phambili. Kungenxa yokuba liza kuphela kwi-V-6 version.
Le imoto ekhululekile ukuqhuba. Abanye bawubiza ngokuba ngaphantsi komsebenzi kodwa oko akunzima. I-oomph inokuhambisa intsapho yezine phantsi kwendlela.
Umzobo wawunobungozi kodwa akukho nto ihlaselayo. Oku kungabonakaliyo ukuba ibonakaliswe ngokugqithisileyo ngabaphathi beesebe zamapolisa ukuxuba.
Imibiko yabathengi inika i-Ford Five Hundred good ratings ngo-2005 ukuya ku-2007, loo nyaka yaveliswa. I-CR iphakanyiswa imoto esetyenziswayo.
I-Acura TL SH-AWD Imoto Eninzi Eyisebenzisiweyo yabazali abangabodwa
I-Acura TL ka-2006 ngumzekelo obalaseleyo kwizinto zokuzonwabisa zemidlalo, ikakhulukazi kubazali abangabodwa. Ifoto © Acura
Umzali ongenamzali akasoloko ephika ukuzijabulisa ezilula ubomi kunye ne-Acura TL yenye yezinto ezilula zokuphila. Ukusebenza kuyindawo. Ukuphatha kakuhle kwaye akukho nqongophala yendawo yabantwana kunye nempahla yabo.
Ukukhathazeka okukodwa malunga ne-Acura TL enokuthi abazali abathile abangabodwa bangaxhalabisa malunga nokuyila kwayo. Kungenakudala kwaye uhlale ushiye isithuthi esingajonga ngexesha.
I-Acura TL SH-AWD inomdla kumzali omnye onabantwana ababini ngenxa yokuba:
Igama layo liyimpawu yalo eqinile: SH-AWD ibonisa ukunikezelwa okukhulu, i-wheel-wheel drive. Awuyi kufumana izidibanisi ezingcono kakhulu ngaphandle komgangatho wokusebenza.
Akunjalo ukuba uphethiloli ojikelezayo edolophini kwisixeko sama-17-mpg ngenxa ye-wheel drive. Inombolo yomgwaqo e-25 mpg ayilimazi kakhulu kwi-injini ye-V-6 eyi-3.7 ilitha.
Le moto imnandi ukuqhuba. Akukho nto ithi umzali omnye akanako ukumncenga kanye ngexesha okanye kunye nabantwana kwi-tow.
Le nto imoto enhle ngaphakathi kunye nesistim esilungileyo sokudlala iWiggles ngokucacileyo.
Imibiko yabathengi ikhuthaze i-Acura TL ukususela ngo-2001 ngamanqaku aphezulu. Kuyinto enokwethenjelwa, i-sedan yokuzonwabisa ukuqhuba.
ICalifornia iyifumana ngokuchanekileyo noMthetho woLwazi lweSalvage
Indlela Yokuxabisa Imoto Yakho Eyisebenzisileyo
Indlela yokusebenzisa i-Facebook Ukuthenga iCandelo lakho elilandelayo elisetyenzisiweyo
Yintoni onokuyilindela ekuthengeni apha Nakho hlawula abathengisi
Ukuthengisa Imoto Yakho Eyetyenzisiweyo: Kungcono Ukuzithengisa okanye Ukuthengisa?
Imfazwe ye-League of Cambrai: iMfazwe ye-Flodden
Ngaba i-Alum Safe? Ukukhathazeka kweMisebenzi kunye nezoMpilo
Ukwakhiwa kwesakhiwo seNzululwazi: Yintoni iGlycolysis?
INgcaciso yeGolati Inkcazo 'Yokulandelela': Indlela abaGaluza basebenzisa ngayo ixesha